Drafitra faran'ny herinandro miaraka amin'ny zanaka sy ankohonana | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | General, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Manomana faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy Mety hanjary sarotra izany, indrindra satria tsy maintsy mahita toerana itodiana izay mety amin'ny rehetra isika. Ny ankizy kely dia tokony hampiala voly ary ny olon-dehibe koa, miaraka amin'ny fatra mahafinaritra sy fialan-tsasatra ho an'ny roa tonta. Androany ianao dia afaka manao drafitra marobe amin'ireo ankizy izay amin'ny faran'ny herinandro ihany, satria manana fahafaha-manao sy fampahalalana marobe amin'ny alàlan'ny tranonkala izahay.
ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy Tokony hampiala voly ho an'ny fianakaviana iray manontolo izy ireo. Tsy maintsy miara-manao zavatra ny tsirairay, mba tsy hisy ho tavela. Izany no antony tsy maintsy hitadiavanao traikefa sy hetsika mifanaraka amin'ny fomba fiainan'ny fianakaviana.
1 Làlana fitsangatsanganana tsotra
2 Piknik any an-tsaha
3 Trano ambanivohitra ho an'ny rehetra
4 Mitaingina bisikileta
5 Andro fitobiana
6 Tsidiho ny tranombakoka
7 Fantaro ny tanànanao
8 Mahita tsiro vaovao
Làlana fitsangatsanganana tsotra
Ny iray amin'ireo zavatra azontsika atao miaraka amin'ireo ankizy kely mandritra ny faran'ny herinandro dia ny fizahana lalana amin'ny dia an-tongotra miaraka amin'ny fahasarotana ambany. Miankina amin'ny taonan'ny ankizy sy ny endrik'izy ireo ara-batana, afaka mankafy làlana vitsivitsy misy kilometatra vitsivitsy izay hampiala-voly azy ireo isika, handany angovo ary hahita ny natiora. Ny famenoana amin'ny faran'ny herinandro amin'ny sasany amin'ireo làlana ireo dia hevitra tsara, satria izy io dia fialamboly mahasalama ho an'ny fianakaviana iray manontolo ary mazava ho azy fa mampiala voly tokoa. Raha tsy azontsika antoka fa làlana azon'ny ankizy idirana io, dia azontsika atao foana aloha, satria indraindray mety ho lava na sarotra izy ireo noho ny tany.
Piknik any an-tsaha
Hevitra lehibe iray hafa koa ny mandany andro tsy any an-trano ary hanao zavatra hafa. Afaka manao a fitsangantsanganan'ny fianakaviana mahafinaritra any ambanivohitra. Any amin'ny tanàna maro dia misy zaridaina lehibe mamela antsika hanao zavatra toa an'io nefa tsy mila manao dia lavitra. Mila mandamina fotsiny ny sakafo ianao, mampiditra lamban-databatra lehibe ary mankafy ny sakafo matsiro, izay tsara kokoa hatrany ivelany. Mandritra ny tolakandro dia afaka mitondra kilalao birao vitsivitsy isika handraisan'ny fianakaviana iray manontolo anjara.
Trano ambanivohitra ho an'ny rehetra
Ankafizo a amin'ny faran'ny herinandro any amin'ny trano ambanivohitra Tsy natao ho an'ny mpivady na vondrona namana fotsiny. Misy trano any ambanivohitra izay safidy tsara ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Tsara ny misafidy trano izay ohatra, manana toeram-pilalaovana, na dobo filomanosana raha afaka milomano ny ankizy. Amin'ity fomba ity dia hampifalifaly bebe kokoa izy ireo. Amin'ny manodidina ny trano ambanivohitra dia matetika misy toerana voajanahary tsara tarehy, noho izany ny fanaovana zotra, an-tongotra na bisikileta, dia mety ho zavatra hafa mety hitranga.
manao karazana fanatanjahan-tena mandritra ny faran'ny herinandro dia mahasalama ho an'ny fianakaviana manontolo izany. Indraindray afaka mandeha mitsangantsangana isika ary ny hafa kosa mandeha bisikileta maivana. Misy toerana azo antoka hanaovana ireo zotram-by ireo amin'ny bisikileta, fa tsy maintsy mitady làlana mora azo sy mora foana ho an'ny rehetra isika. Hetsika somary sarotra kokoa io, saingy mendrika izany raha manana toerana ahafahantsika rehetra mandeha miaraka bisikileta isika.
Hetsika iray hafa mety hahaliana ny ankizy ny manao ny andro filasiana miaraka. Izany dia afaka manampy azy ireo hianatra zavatra vitsivitsy, toy ny manangana tranolay ary mifanaradia amin'ny natiora tsara kokoa. Misy toerana hitobiana ary afaka mandeha mitoby mandritra ny andro koa ianao, na dia somary sarotra aza izany. Raha handeha hiaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo dia tsara kokoa ny mitady toerana toa ny tobin'ny tobim-pianarana hahafahana manana serivisy sasantsasany misy.
Tsidiho ny tranombakoka
Azo atao ihany koa izy ireo fitsidihana ara-kolontsaina amin'ireo ankizy kelyKoa satria misokatra amin'ny fianarana rehetra izy ireo dia toy ny spaonjy. Raha mitondra azy ireo hitsidika tranombakoka isika dia azo antoka fa hanana fomba fijery hafa momba ny asa izy ireo. Azontsika atao ny milaza amin'izy ireo momba azy ireo na mamela azy ireo handika ny kanto amin'ny fombany manokana. Na izany na tsy izany, safidy tsara foana ny mitsidika tranombakoka amin'ny faran'ny herinandro. Amin'ny ankamaroan'izy ireo, ny hetsika dia voarindra miaraka amin'ny ankizy na torolàlana mba hampianarana azy ireo zavakanto amin'ny fomba fijery toa ny zaza.
Fantaro ny tanànanao
Azo antoka fa misy zorony ao an-tanàna izay mbola tsy hita, na toerana vaovao sy hetsika mbola tsy nosoniavinay. Ao an-tanàna dia betsaka ny zavatra azo jerena, noho izany dia afaka manao lisitry ny fitsidihana foana isika hahitana amin'ireo ankizy kely, ary koa ireo hetsika azo tanterahina isaky ny vanim-potoana ao an-tanàna mba tsy hanadinoana na inona na inona. Mila mijery ao amin'ny torolàlana fialam-boly any an-tanàna ianao hahitanao izay mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Mahita tsiro vaovao
Raha tian'ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana isika manandrana tsiro vaovaoHevitra tsara ny mandany ny faran'ny herinandro hahitana toerana vaovao hanandramana sakafo samihafa. Ny kely dia azo antoka fa ho tia mihinana amin'ny japoney misy hazokely, na mahita sakafo arabo. Manampy azy ireo hisokatra bebe kokoa amin'ny sakafo sy ny tsiro izany, hanandrana sy hiaina zavatra vaovao sy samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Mikasa mandritra ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy
Lapan'ny mpanjaka adala